Novambra 1995, novambra 2017, feno 20 taona katroka ny fiaraha-miasa ny Mpitandrina RAZAFINDRAMANITRA Vololoniaina mianakavy sy ny fiangonana FJKM Ambalavao Isotry. Niroso tamin'izany fankalazana izany isika eto Ambalavao Isotry ka toy izao ny fandaharam-potoana:
Volana novambra 2016: nitsangana ny komitin'ny fankalazana (natsoina tamin'ny hoe K20FM). Tinapaka tamin'izany fa Co-président no hitarika dia Andriamatoa isany
RAVOAJANAHARY Seth sy RAVANTY Donné.
Mpitahiry vola: RANDRIANARIMANANA Patrice - RANDRIANASIMANANA Tojozo Stéphane
Mpitantsoratry ny fivoriana: RAKOTOARIMANANA Lucille - RAVONJIARISOA Jean Baptiste Raymond.
Napetraka sy naseho ny fiangonana izy ireo ny 8 janoary 2017 alohan'ny hanombohany ny andraikiny avy.
"Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo" (Heb.13/7a) no tapaka fa hanankinana ny fankalazana ary nampiana ny teny filamatry ny mpitandrina hoe "Inty aho, iraho aho" (Isa.6/8b) izany.
2 jolay 2017 no ivon'ny fankalazana. Fiaraha-misakafo tao amin'ny Live Hotel Andavamamba no hetsika natao hahazoam-bola hiatrehana ny fotoam-pamaranana ny 25-26 novambra 2017. Ny rakitra maitsokely no nozaraina roa nandritra ny herintaona hanampiana ny vola azo tamin'ny sakafo.
23 jolay 2017, alahady ny mpitandrina. Ny tolakandro dia nanokana fotoana ny sekoly alahady, tamin'ny alalan'ny SOLOFO, hitondrana am-bavaka ny mpitandrina mianakavy.
Nisy ihany koa ny fotoana izay niarahana tamin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara, zanaky ny fiangonana ho fandraisan'anjaran'izy ireo, toa an-dry Menafify, Titianah, sns...
Crée le dimanche 25 mars 2018 à 17:32:47